Isku-xirnaanta, qalab aad u faa'iido badan | Laga soo bilaabo Linux
Isku-xirnaanta, qalab aad u faa'iido badan
cayriin | | La cusboonaysiiyay 02/07/2015 12:30 | GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Asxaab wanaagsan! ..
Qoraalkayga ugu horreeya waxaan u imid inaan kuu keeno hagitaan deg deg ah oo ku saabsan aalad aan muddo dheer adeegsan jiray, tan ayaa lagu magacaabaa Isku dhafka. Barnaamijkani wuxuu noo ogolaanayaa inaan wadaagno kumbuyuutarkeena iyo jiirkeena inta udhaxeysa kumbuyuutar dhowr ah, oo aan uga dhaqaaqeyno hal kormeere una wareejineyno mid kale, kaliya adigoo jiirka u jiidaya cirifka kormeeraha.
0.1 Dhinacyada xiisaha leh:
2.1 2.2. Faylka isku xidhka:
2.2 2.2.1. Tusaalaha qaabeynta:
2.3 2.2.2. Maxaad u isticmaashaa qaabeynta qaabeynta qoraalka?
2.4 2.3. Bilaabida Server / Macmiil
2.5 2.3.1. Bilow Server
2.6 2.3.2. Bilow Macaamiil
3 3. Dhibaatooyinka guud (oo aan shakhsi ahaan la kulmay):
3.1 3.1. Isla Magaca martida:
3.2 3.2. Cilad «Magaca shaashadda aan la garanayn« XXX »«
3.3 3.3. Cilad «Ma furi karo shaashadda aasaasiga ah«
3.4 3.4. Dhibaatooyinka kale
Dhinacyada xiisaha leh:
Waa qaab-dhismeed badan! Haa mudane, waad kaga gudbi kartaa adigu Dhibco linuxera dhadhanka, iyo sidoo kale daaqadda iyo / ama tufaaxa.
Adoo adeegsanaya dhowr kombiyuutar, waxaan u isticmaali karnaa barnaamijyo dhowr ah oo loo qaybiyay mashiinnadayada iyadoo aan la dhergin hal processor; Si kale haddii loo dhigo, macnaheedu waxa weeye uma baahnin "kombiyuutar super" laakiin waxaan ka faa'iideysan karnaa dhowr ka mid ah oo leh kheyraad yar.
Ku habboonaanta, kaliya kumbuyuutar iyo jiir ka sarreeya miiska.
La wadaag sabuuradda (nuqul oo dheji qoraalka) kombiyuutarada dhexdooda.
Sidaan kor kuugu sheegay, inkasta oo aan nahay qaab-dhismeedyo kala duwan, haddana waxaan diiradda saari doonnaa sida loogu isticmaalo innaga penguin. Tilmaamahan waxaan diirada saarayaa Debian iyo waxyaabaha ka dhasha (Ubuntu, Linux Mint, iwm.) waxqabad ahaan, laakiin waxaan ka shakisanahay inay adkaan doonto u guurida mid kale diirrada. Ma bilaabi karnaa?
Waxaan kala soo dagsan karnaa nooca ugu dambeeyay halkan, ama nooc gaar ah oo hore, ama beta ama xasilloon ka Bari link.
Ama, markay tahay Debian oo laga soo dheegtay, kaydkoodii:
Rakibida xirmada waa in lagu sameeyaa dhamaan mashiinada doonaya inay ka qeyb qaataan isticmaalkiisa.
Tallaabada ugu horreysa ee dejinta isku-daba-marinta waa in la furo dekedda iyada oo iskuxirka lagu samayn doono, waayo Default tani waa dekedda 24800. (haddii aad horey u isticmaashay ama aad rabto inaad mid kale isticmaasho, waxaa lagu sameyn karaa si aamusnaan ah, kaliya markii la fulinayo waa inaad sheegtaa dekedda la adeegsanayo); tan waxaa lagu sameeyaa amarka Iptables:
Muxuu sidan sameeyaa
-A = silsilad ayuu xeer ku darayaa.
-p = wuxuu qeexayaa hab maamuuska.
--dport = wuxuu tilmaamayaa dekedda loo socdo.
-j = wuxuu go'aamiyaa ficilka.
2.2. Faylka isku xidhka:
Hadda dekedda oo furan, waxaan ku sii soconnaa qaabeynta isku-daba-marinta:
Iyada oo aad tifaftiraha qoraalka aad jeceshahay (kiiskeyga vi) waxaan abuuraynaa faylka iskudhaf.conf en / iwm /
Gudaha gudaheeda waxaan ku qoreynaa qaab dhismeedka soo socda:
Fiiro gaar ah: qaabdhismeedka kor lagu muujiyey ayaa tusaale u ah qaabeynta 3 mashiin. Taas oo midda dhexe ku jirtaa ay tahay server-ka (midka jiirka iyo kumbuyuutarka leh) kan kalena 2 u yahay macaamiil dhinacyadiisa ah. Kala beddel qaabeyntaas iyadoo kuxiran nidaamka iyo tirada mashiinnada aad jeceshahay.
2.2.1. Tusaalaha qaabeynta:
// Amarka: Bidix —-> Xuquuq
// Magaca martida: PC1 (server) ---> PC2 (macmiil)
midig = PC2
bidix = PC1
2.2.2. Maxaad u isticmaashaa qaabeynta qaabeynta qoraalka?
Hagaag, sababta ugu horeysa ayaa ah inaadan dhab ahaan ikhtiyaar lahayn, inaad adeegsato nooc nooc ah oo leh qaab muuqaal ah. Marka labaad, waxay ku siinaysaa xakameyn dheeraad ah. Is-dhexgalku ma abuuri karo dejin horumarsan, sida isku xir aan-isu-soo-noqosho lahayn. Tusaalaha isku xirnaansho la'aanta waxaa weeye haddii aad u tagto midigta kormeeraha A waxaad helaysaa kormeerida B, laakiin haddii aad u tagto bidixda kormeeraha B waxaad helaysaa kormeer C halkii aad mar kale la socon lahayd A sidii ay ahaan lahayd qaabeynta isku xirnaanta isweydaarsi.
Dejintani way fududahay in lala wadaago dadka kale.
Waxaad yeelan kartaa wax kabadan hal qaabeyn hubaysan, kiisaska kaladuwan. (sida ay noqon karto a buug inaad u isticmaasho meelo kala duwan)
2.3. Bilaabida Server / Macmiil
2.3.1. Bilow Server
Marka la qaabeeyo ku habboon la sameeyo, waa u fududahay sida gelinta soo socota qunsulka:
U fiirso 's' dhamaadka, tani waxay tilmaamaysaa server.
Haddii aan rabno inaan aragno inay ku xirtay qaabeynta si guul leh iyo wax ka badan info, markii aad bilaabeysid, geli waxyaabaha soo socda:
2.3.2. Bilow Macaamiil
Marka adeegu ka bilowdo mashiinka aan ka isticmaali doonno agabyadayada (kumbuyuutarka iyo jiirka), waxaan bilaabaynaa inta kale ee mashiinnada ku lug leh macaamiil ahaan; gelinta boosteejada:
U fiirso 'c' gudaha macmiilka, oo xagee ku qorantahay ServerIP dhig IP-ga u dhigma, haddii aan diiradda saarno kiiska tusaalaha (eeg 2.2.1) waxay noqon laheyd:
–Haddii aan rabno inaan aragno dabeecaddeeda iyo isku xirnaanta ay la leedahay server-ka:
- Haddii aan cayimnay deked ka duwan ta ay isticmaali jirtay Default (24800), waxaan dhignaa:
3. Dhibaatooyinka guud (oo aan shakhsi ahaan la kulmay):
3.1. Isla Magaca martida:
Haddii mid ka mid ah kombiyuutarada aad rabto inaad ku xirmaan adoo maraya Isku dhafka Waxay leedahay magac la mid ah kan kale, barnaamijku ma ogaan doono marka loo adeegsanayo iyaga oo loola jeedo. Si loo xaliyo dhibaatada, waa inaan dib u magacawno (magaca aqalka) midkood. Waxaan tan ku gaarnaa habka soo socda:
, ka dib ayaan wax ka bedelnaa feylka:
, hubinta in 127.0.0.1 ay tixraac ka sameyso isla kombiyuutarka:
3.2. CiladMagaca shaashadda ee aan la aqoon «XXX» «
Haddii qaabeynta si guul leh loo raray oo aad heshay qaladkan, markaa waxay ka dhigan tahay in kormeeraha adeegga uusan ku jirin qaabeynta. Dhammaan kormeerayaasha waa in lagu qoraa qaabeynta.
3.3. CiladMa furi karo shaashadda aasaasiga ah«
Si tan loo xaliyo, xalka fudud ayaa ah in marka hore la bilaabo macmiilka, ka dibna serverka.
3.4. Dhibaatooyinka kale
Khaladaadka kale ee soo baxa, dhibaatooyinka soo socda ayaa ku xira bogga Isku dhafka.
Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay casharradayda gaaban. Waxaa xusid mudan in kasta oo aan muujiyo qaabeynta aasaasiga ah, waxay leedahay howlo kale oo badan oo lagu daro, sida xaddidaadda qayb ka mid ah kormeeraha u-wareejinta loo sameeyay mashiinka kale, iyo kuwo kale. Hadaad rabto inaad balaadhiso waad awoodaa google loogu talagalay dejinta horumarsan.
Taasi waa intaas, waxaanan rajaynayaa in tabarucaadku noqon doono hal badar oo ciid ah oo qof walba u baahan.
Laga soo bilaabo mar hore aad ayaad u mahadsan tahay ..
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Isku-xirnaanta, qalab aad u faa'iido badan
Cajiib, aad iyo aad u faa'iido badan.
OT: Waxaan u arkaa inaad aqbashay qoraalkaygii! .. wii ..
Waan ku faraxsanahay inay waxtar kuu leedahay .. 😀
Aad u fiican. Tani runta ayaa ah inay umuuqato mid waxtar badan. Waxaan maqli jiray is dhexgal, laakiin weligay iskuma dayin. Aad baad u mahadsantahay. 🙂
Michael Martinez dijo
Macluumaad wanaagsan, si wanaagsan u qaabeysan aan isku dayno
Jawaab Miguel Martinez
Well Scalibur… Ku soo dhowow qoyska. Wakiilkeyga usr waa xun yahay haddiiba ay dhacdo. Aad u faa'iido badan.
Mahadsanid .. .. .. wakiilkeyga usr sidoo kale waa qaldan yahay .. Waxaan u adeegsadaa Linux Mint xilligan la joogo OpenBox .. mardhow isticmaalaha ArchLinux ..
Fikradda mawduucuna waxay ahayd in la soo bandhigo wax faa'iido leh oo aan lahayn wax baris ah, ama ugu yaraan aan soo arkay ..
Hadal la'aan, maxaan kale dhihi karaa. Mawduuc aad u fiican iyo sidoo kale beddel aad u wanaagsan ama ikhtiyaar u ah kuwa haysta (aniga ayaa ku jira) baahida loo qabo in la isticmaalo kumbuyuutarro badan oo aan ka maareeyo hal mid aan wax badan ku jirin desktop-ka.
Tani way ka waxtar badan tahay adeegsiga KVM, maxaa yeelay waxay kuu oggolaaneysaa inaad nuqul ka sameysato oo aad ku dhejiso kombiyuutarrada kala duwan ... AAD U FADLAN FARIIMAHA boostada, waana tan koowaad.
Aad baad ugu mahadsan tihiin soo dhaweynta! .. ..waxaanan ku faraxsanahay inay waxtar idin leedihiin ..
Waxaan rajeynayaa in kani uu yahay kan ugu horreeya;) ..
Xubin soo dhowow 😉
Waxaan horeyba ugu isticmaalay codsigan mashruuc kahor, dhibka kaliya ama xaddidaadda aan arkay waa inaan ubaahanahay inaan xakameeyo 15 kombiyuutar isku mar HAHA, LOL aad u badan!
Salaan iyo haa, aan rajeyno inay tahay tii 1aad ee kuwa badan 😀
Salaan! qoraal aad ufiican, waxaan ku tijaabinayaa kumbuyuutarkeyga kumbuyuutarka iyo dhabta, kumbuyuutarka waa la kala qaaday I ..waxaan leeyahay hal shaki, waan ogahay in barnaamijka lagu rakibayo labada qaybood, laakiin qaabeynta aniga ma ahan aad baan u cad ahay, waxaa kaliya lagu sameeyaa PC Server ama labadaba waa inaan dhigaa feylka qaabeynta?
Wanaagsan! .. ..waxaa kaliya loo baahan yahay isku xidhka kombuyuutarka PC .. ..waxaan rajaynayaa inuu kuu shaqeynayo ..
ok mahadsanid ... dabcanna waxay noqon doontaa mid waxtar badan ...
Weli ma aanan isticmaalin laakiin haddii ay leedahay jawaab xawaare fiican waxay noqon kartaa beddel xiiso leh oo ah ssh / mosh markaad haysato mashiinka agtiisa.
Waa salaaman tahay .. .. .. runtii waa mid aad u dhaqso badan marka laga hadlayo jawaab celinta .. ..Ficil ahaan farqi uma dhaxeeyo hal mishiin iyo mid kale .. ..waxaa kale oo suuragal ah in laguwaafajiyo isukeenista ssh .. ..Salaamo! ..
Waa la qabtay, waxaan eegay feylasha qaabeynta ee lagu soo raray dardahayga, waxaan eegay hagahaaga waxaanan horeyba u haystay kooxuhu inay ku biireen Synergy-ka Avahi halkii IP-yada (taas oo ah waxa aan ku isticmaalo guriga).
Aad u cadee sharaxaadaada Scalibur. Awooda Grayskull !!
Ah maya, taasi waxay ahayd seefley kale 😛
Hahaha .. .. Aad ayaan ugu faraxsanahay inay ku caawisay ..
PS: sidee Avahi u xiisa badan yahay, waligay ma maqal isaga ..
Avahi / mDNS waa hal-abuurka ugu fiican adduunka kadib shukulaatada Latte 🙂
Dhab ahaantii Avahi waa horumarinta furan ee Bonjour, hirgelinta Apple ee borotokoolka Zeroconf oo ay ku jiraan mDNS oo ah tiir ka mid ah hirgelinta maaddaama ay si sax ah u tahay tiknoolajiyada mDNS oo u oggolaanaysa in badan oo ka mid ah shabakadda LAN si ay iyagu is-is-bartaan oo markaa is-habeeyaan dhammaantood qalab ku xiran adeeggan.
Oo halkan waxaan rabaa inaan ka dhigo tilmaam kooban:
Apple had iyo jeer waxay udub dhexaad u tahay cambaareynta naxariis darada ah ee uga timaadda inta kale warshadaha, xaqiiqduna waxay tahay in inta badan waqtiyadaas ay gabi ahaanba cadaalad daro tahay madaama labada maamulood ee mDNS (qalab badan oo isticmaalaya Zeroconf), sida CUPS iyo WebKit, looguna magac daray seddex Horumarka Hyper-yaqaan waxaa ku soo saaray Apple si gebi ahaanba furan ah maantana dhammaanteen waan ka wada faa'iideysannaa. Micro $ oft, dhanka kale, maahan oo keliya dhaqammo ganacsi oo nacayb leh (sida Apple, waa run) laakiin sidoo kale waa kuwo dhexdhexaad ah oo fiiriya xudduntooda oo had iyo jeer ku nool horumarin si qarsoodi ah oo aan daabacaadda caddaymaha, sida ay ahayd kiiska CIFS, Horumarinta Microchot oo ku saleysan SMB (Server Message Block) oo markii dambe dib loogu soo celiyay qaybta F / LOSS ee SAMBA.
Xaaladdan gaarka ah, Micro $ oft sidoo kale waxay leedahay hirgelinteeda Zeroconf laakiin dabcan waa fulin lahaansho, gebi ahaanba xiran oo aad uga dhexdhexaadsan Apple, maxaa yeelay haddii aan eegno waxa guud ahaan shabakadaha Microsoft, waxaan arki doonnaa tiro badan baakado gadaal iyo gadaalba u socda meel kasta, oo ay isku dhacayaan oo ay ku qanacsan yihiin shabakadda.
Maxaa intaas ka sii badan: haddii aad fursad u hesho inaad ilaaliso shabakadaha Microsoft, waxaad arki doontaa sida loo yaqaan 'LEDs' tilmaamayaasha culeyska kaararka shabakadda (guud ahaan cagaaran) ay u bilig yeeshaan si isdaba-joog ah iyagoo aan istaagin, sida waalan, marka isla hirgelinta barnaamijyada Apple ama F / LOSS ay tahay wax badan oo waxtar leh.
Aynu sii wadno…
Faa'iidooyinka isticmaalka Avahi / Zeroconf / Bonjour waa badan yihiin, oo ay ku jiraan:
1. Mar dambe uma baahnid inaad xasuusato IP-ga mashiin kasta tan iyo markii aad isticmaaleysay Avahi waxaad ku marin kartaa magacooda + .local, tusaale ahaan:
olivetti.local (adeegeyga gurigeyga badan)
heybeavis.local (dhabta dhabta)
Isticmaalka Avahi / mDNS waxaan ku galaa mid kasta oo ka mid ah magaceeda halkii aan ka isticmaali lahaa IP-ga. Sidan oo kale, deegaanno leh mashiinno _many_ ah, waxaad ka takhalusi doontaa dhibaatada IP-yada kombiyuutarada is beddelaya maadaama aad had iyo jeer ku heli doontid iyaga magaca martida loo yahay.
Intaas waxaa sii dheer, shabakadaha kombiyuutarka ayaa si aad ah loo maamuli karaa dadka aan aqoonta u lahayn fikradda OSI oo weli hela cinwaan IP ah oo ku dhow arcane.
Xaaladdayda gaarka ah, waxay horeyba u ogaayeen guriga haddii aanan joogin oo shabakaddu gaabis tahay, waa sababta oo ah waxaan u qulqulayaa sida jahannamada oo kale (dhammaan waxyaabaha sharciga ku jira, dabcan: D) markaa waxa kaliya ee ay tahay inay sameeyaan waa inay marin u helaan server-ka. magacaaga iyo hakadka soo degsada - adoo adeegsanaya gudbinta websaydhka qabow ee Gudbinta. Laakiin haye, xitaa ma oga waxa Gudbintu yahay xD
2. Bareesada & Cayaarta: urur ama shabakad weyn adoo adeegsanaya Avahi waxaad si otomaatig ah uga dhigeysaa aalad kasta oo aad rabto inaad la wadaagto mid la heli karo, tusaale ahaan madbacadaha, iskaanka, server-yada, NAS, iwm.
3. Avahi / mDNS sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad IP-yada go'an u magacawdo magaca martigeliyaha gaarka ah. Tusaale ahaan: waxaad cadeyn kartaa in dhamaan mashiinada kujira shabakad gaar ah laga heli karo hostnameX.local taasoo si weyn u fududeyneysa is dhexgalka mashiinadan (adeega, rakibida softiweerka cusub, iwm).
4. Runtii AAD AAD U RAAXO LEH in loo isticmaalo Avahi / mDNS rakibidda shabakadaha macaamiisha maaddaama sidan oo kale - loogu talagalay kor ku xusan - waxaan nafteenna ka xoreynaynaa weligeen xusuusta kaabayaashooda iyo qaabeynta. Anagoo garanayna magaca koox kasta (tusaale ahaan pinginginging) waxaan u dhaqaaqeynaa sida cirib oo kale shabakadda oo waxaan ku dhammeyneynaa shaqadeena waqti hore oo aan dib u dhac lahayn 🙂
Sikastaba, Avahi / mDNS (Avahi / Zeroconf) waxay bixisaa fursado badan oo aan u isticmaalo kaliya jajab laakiin xaqiiqdii qof ay tahay inuu maareeyo shabakad kooxo badan oo leh baahiyo heteroodh ah iyo jawi isbeddela ayaa u arki doona waxtar badan ^ _ ^
haha post wanaagsan, waxa ugu fiican ayaa ah in markaad ka shaqeysid dhowr desktops isla mar ahaantaana aad leedahay jiirka qof walba runti waxwalba way fududeyneysaa, waxaan u maleynayaa inay fiicantahay.
Sideedaba la yaab ayey noqon laheyd haddii aysan aqbali doonin jagada waa mid aad u wanaagsan.
Ku jawaab rodolfo
Maqaal aad u fiican…. mahadsanid oo sii wad waxyaalaha xiisaha leh.
Waad ku mahadsantahay i tusida barnaamijkan.
Waxaan aaminsanahay baahida ka hor inta aanan arkin Boosta.
Tijaabinta iyo ansixinta.
Si fiican ayey iigu shaqeysay aniga. Hadda waxaan ahay xaasidnimo ciyaartoy badan.
Haye! .. ..waxaan uun ogaaday jawaabtaada .. ..nooga xumaada (maxaa dhaca marka aadan hubin e-maylkaaga) ..
Waan ku faraxsanahay inay kuu shaqeysay! .. 😀
Waxaan sii wadaa isticmaalka maalin kasta ... labadaba waqtiga firaaqada iyo shaqada .. trabajo
Muxuu Ubuntu ugu baahan yahay qaab Android ah "Mashruuca Butterka"?
Feeryahan - Trojan-ka saameeya aaladaha Android